सरकार, निर्मला हत्याकाण्डमा बम दिदिबहिनी र एसपीका छोरालाई कारबाही हुन्छ की हुन्न ? - Purbeli News
सरकार, निर्मला हत्याकाण्डमा बम दिदिबहिनी र एसपीका छोरालाई कारबाही हुन्छ की हुन्न ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २२, २०७५ समय: ८:००:१३
सोही घटनामा आरोपी दिलिपसिंह विष्टलाई केरकार गर्ने क्रममा यातना दिने प्रहरीका साथै तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट समेतलाई विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले हेलचेक्राइँ र लापरवाही गरेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ र त्यसमा सहभागी सबै प्रहरीलाई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी प्रहरीको गोलीबाट घाइते भएकाहरुलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनिएको छ । पीडितलाई सामाजिकरुपमा पुनस्र्थापना गराउन सिफारिस गरिएको छ । प्रतिबेदनले सोही घटनामा बम दिदिबहिनी र एसपी सहित उनका छोरालाई शंकाको घेरामा राखेको छ । अब हेर्न बाँकी छ प्रतिबेदनले भनेअनुसार उनीहरुमाथि अनुसन्धान हुन्छ या पुरानै पारामा प्रतिबेदन नै गलत भन्दै दोषीलाई उम्काउने प्रयास गरिन्छ ।